Maraykanka, 01 February 2017
Arbaco 1 February 2017
Dacwado ka Dhan Ah Trump oo la Xareeyey
Dhowr dacwo oo ka dhan ah madaxweynaha Mareykanka Donald Tump ayaa la xareeyey dalkan Mareykanka wax ka yar laba toddobaad markii xilkaas loo caleemo saarey.
Trump oo Garsoore u Magacaabay Maxkamadda Sare
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaakim federaal oo kasoo jeeda gobolka Colorado Neil Gorsuch u magacaabay kursi ka banaan Maxkamadda Sare oo uu ka geeriyooday Antonin Scalia bishii February ee sanadkii tagay.
Maxaa ka Dhashay Go'aankii Madaxweyne Trump?
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa difaacay go’aanka uu ku mamnuucay qaxootiga ka imanaya toddoba waddan oo muslim ah oo Soomaaliya ay ka mid tahay.
Ku-simaha Xeer Ilaaliyaha Qaranka Mareykanka Dana Boente ayaa ku amray Waaxda Cadaaladda Mareykanka inay difaacaan amarrada madaxweyne Trump saacado yar un kadib markii uu magacaabay.
Trump oo Xilkii ka Qaaday Xeer Ilaaliyihii Qaranka
Madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa si deg deg ah xilkii uga qaaday ku simaha xeer ilaaliyaha guud ee Maeaykanka Sally Yates.
Wareysi: Madaxa Hay'adda Qaxootiga Mareykanka
Mudaaharaad ka Dhan ah Trump oo ka Dhacay Minneapolis
Dibadbax ka dhan ah wareegtada Madaxweyne Donald Trump oo ka dhacay xaafadda Soomaalidu ku badan tahay ee Cedar, ee magaalada Minneapolis. Dibadbaxan oo ay ka soo qeyb galeen jaaliyadaha kala duwan ee gobalka Minnesota ayna waxaa soo qabanqaabisay Ilhan Cumar, ayaan Maxamud Mascade waxaa uu ka wareystey Jaylani Maxamed Xuseen oo ah guddoomiyaha hayadda u doodda xuquuqda Muslimiinta ee CAIR qeybteeda Minnesota, kana mid ahaa mas'uuliyiintii goobta ka hadashay.